समाजवादी क्रान्ति हाम्रो लक्ष्य हो, यसमा सम्झौता हुँदैन : देवेन्द्र पौडेल (भिडियो) – Lokpati.com
सरकार अपराध राशिफल पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड नेपाली काँग्रेस नेपाल प्रहरी केपी शर्मा ओली नेकपा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चितवन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री मृत्यु अमेरिका पक्राउ
By सुजिता हमाल Last updated Apr 27, 2020
काठमाडौं, १४ वैशाख। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य एवं पार्टी स्कूल विभागका उपप्रमूख देवेन्द्र पौडेलले सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता हुँदैमा पार्टीको स्थायी समिति बैठकको मागलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताएका छन्।
आइतबार दिउँसो लोकपाटी सम्वादमा बोल्दै नेता पौडेलले गम्भीर प्रकृतिका राजनीतिक मुद्दामा पार्टीको निर्णय सरकारले मान्नुपर्नेसमेत बताए। पौडेलले समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्नुपर्ने बेलामा सरकारको नेतृत्व अराजक र उत्ताउला गतिविधिमा लागेको बताएका छन्। उनले आउने स्थायी समितिको बैठकमा सरकारका कामकार्वाहीबारे गम्भीर समीक्षा हुने बताएका छन्।
‘नेकपामा पेचिलो अवस्था छ, हामीले पेचिलो अवस्थाबाट समस्याको समाधान खोजिरहेका छौं’ नेता पौडेलले भने, ‘माओत्सेतुङले भनेझैं पार्टीमा अप्ठ्यारो परेको बेला जनतामा जानुपर्छ। जनताले दिएको फैसलाले नै पार्टीको अन्तरविरोध हल गर्छ। त्यहीअनुसार हामीले पार्टीको स्थायी समिति बैठकको माग गरेका हौं। हामीले पार्टीको बैठकबाट समस्याको समाधान खोजेका छौं।’
‘हामीले स्थायी समितिको बैठकको माग गरेका छौं’ पौडेलले भने, ‘हामी २० जनाले स्थायी समितिको बैठकको माग गरेका छौं। हामीले त्यसमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई भनेनौं। सचिवालयका कमरेडहरुले पनि बैठकको मागमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन। पार्टी पद्धतिअनुसार सरकार चल्नुपर्छ। गम्भीर विषयमा पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ। अध्यादेश त फिर्ता भयो, त्यसले केही सकारात्मक सन्देश पनि गएको हामीले पाएका छौं। तर, पार्टीमा छलफल चाहिँ हुनुपर्छ।’
अध्यादेशबारे पार्टीमा कुनै छलफल नभएको उनले बताए। पौडेलले भने, ‘अध्यादेश रोकियो भन्दैमा स्थायी समिति बैठक रोक्नु हुँदैन। के कारण अध्यादेश ल्याइयो, किन रोकियो ? यति गम्भीर विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्छ। हामी यसको औचित्य बुझ्न चाहन्छौं।’
‘कुनै पनि पार्टी फुटाउने खेल राम्रो होइन, गणितीय रुपमा सदनभित्र सांसद पुर्‍याउन विगतमा यस्ता अभ्यासहरु हुँदै आएका थिए’ पौडेलले भने, ‘त्यो विकृति जनताले मन पराएका थिएनन्। त्यही कुरा रोक्नका लागि दलसम्बन्धी विधानको व्यवस्थामा कडाइ गरिएको थियो। अहिले आएर त्यसमा फेरबदल गर्न खोज्नु राम्रो होइन। प्रधानमन्त्रीलाई कसले यस्तो सुझाव दियो, हामी मर्माहत भएका छौं।’
‘कोरोनाविरुद्ध लड्नुपर्ने बेला सरकार सांसद किनबेचतिर लाग्नु राम्रो होइन। यसले हामीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ’ पौडेलले भने, ‘पार्टी र कमिटीलाई महत्व नदिने कुरा मान्य हुन सक्दैन। हामी फुटको पक्षमा छैनौं, विभाजनको पक्षमा छैनौं। पार्टीलाई बाइपास गरेर सरकार चल्न सक्दैन, चल्नु हुँदैन। सरकारका अराजक र उत्ताउला गतिविधि रोकिनुपर्छ।’
‘स्थायी समिति बैठकमा सरकारको समीक्षा हुन्छ। यो सरकार बहुदलपछि सबैभन्दा लामोे सरकार हो’ उनले भने, ‘सरकार गठन भएको २६ महिना पुगेको छ। यति लामो सरकारले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख भएका प्रतिवद्धता लागू गर्‍यो कि गरेन ? हामीले समाजवादी क्रान्तिको तयारी भनेका थियौं। सरकारका गतिविधि त्यसप्रति लक्षित भए कि भएनन् भन्नेबारे गम्भीर बहस हुन्छ।’
नेकपाकाे स्थायी समिति बैठक लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपाका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलसँग गरिएकाे कुराकानी।
Posted by Lokpati.com on Sunday, April 26, 2020
काश्मिरका बालबालिकालाई रेडियोमार्फत् अध्यापन
बाबुरामको आक्रोश : ‘ओलीतन्त्रमा कोही पनि नागरिक सुरक्षित छैनन्’